Glam & Doll Lash Colorist Semi-Permanent Volume Mascara 010 | CATRICE COSMETICS
အလွန်ကို တိကျထင်ရှားတဲ့ ရာဘာပလတ်စတစ် brush.
Semi-permanent tint effect ပါရှိပါတယ်။
ခကျြခငျြးကို သိသိသာသာ ထူထဲစပွေီး ရှညျလြားခငျြပါသလား? ဒီ mascaraလေးက ပိုအဆငျပွစေပေါလိမျ့မယျ။ Mascaraအရောငျကို ခဏတာစှဲမွဲစတေဲ့ အာနိသငျကွောငျ့ ၂ပတျလောကျ နစေ့ဉျရကျဆကျ အသုံးပွုပွီးရငျ ပိုမိုမဲနကျလာတဲ့ မကျြတောငျကို ရရှိစပေါတယျ။ သူ့မှာ ပါဝငျတဲ့ brushကလညျး မကျြတောငျကို တဈထပျပွီးတဈထပျဆိုးပွီး ထူထူလေးဖွဈသှားစဖေို့ သခြာလေး ပွုလုပျပေးထားပါတယျ။
ချက်ချင်းကို သိသိသာသာ ထူထဲစေပြီး ရှည်လျားချင်ပါသလား? ဒီ mascaraလေးက ပိုအဆင်ပြေစေပါလိမ့်မယ်။ Mascaraအရောင်ကို ခဏတာစွဲမြဲစေတဲ့ အာနိသင်ကြောင့် ၂ပတ်လောက် နေ့စဉ်ရက်ဆက် အသုံးပြုပြီးရင် ပိုမိုမဲနက်လာတဲ့ မျက်တောင်ကို ရရှိစေပါတယ်။ သူ့မှာ ပါဝင်တဲ့ brushကလည်း မျက်တောင်ကို တစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်ဆိုးပြီး ထူထူလေးဖြစ်သွားစေဖို့ သချာလေး ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
AQUA (WATER), PARAFFIN, SYNTHETIC BEESWAX, STEARETH-20, COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX, ALCOHOL, CETYL ALCOHOL, GLYCERYL BEHENATE, STEARETH-2, BUTYLENE GLYCOL, JOJOBA ESTERS, TOCOPHERYL ACETATE, SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS SEED EXTRACT, TOCOPHEROL, HYDROXYETHYLCELLULOSE, ALCOHOL DENAT., CAPRYLYL GLYCOL, METHYLPROPANEDIOL, SIMETHICONE, AMP-ACRYLATES COPOLYMER, POLYURETHANE-14, ISOPROPYL ACETATE, AMINOMETHYL PROPANEDIOL, AMINOMETHYL PROPANOL, PHENOXYETHANOL, CI 77266 (BLACK 2) (NANO), CI 77499 (IRON OXIDES).
Semi-permanent mascara with an innovative formula that makes the lashes darker after2weeks of daily usage. For an instant volume and lengthening effect. The special shaped elastomer brush allows an ultra-precise and easy application foraperfectly defined result. Easy and completely removable with warm water or regular make up remover.
Instant effect: 100% confirm**: Volumized, fuller and longer lashes, good separation effect, no clumping. **Study on 30 women directly after application.
Long-term effect: Darker lashes after2weeks of daily usage*.*Study on 30 women over2weeks of daily usage.